Si Aad U Hesho Shaqo Fiican Raac Lixdan Talaabo. - QaranJobs.com - Somali Jobs - somalijobs - qaranjobs - Daily Somalia Jobs
Home/Career Tips/Si Aad U Hesho Shaqo Fiican Raac Lixdan Talaabo.
Si Aad U Hesho Shaqo Fiican Raac Lixdan Talaabo.
In aad hesho shaqo adiga kugu habboon waxaa laga yaabaa in ay kugu qaadato waqti badan. Helida shaqo aad ku qanacsantahay 100% ma ahan hawl fudud, marka la raadinayo shaqo kugu habboon waxaa lama huraan ah inaad garaneyso habka loo raadiyo shaqadaas.
Hadaba, akhriste waxaan maqaalkan, kugu siinaynaa macluumaadka ugu casrisan, sifooyin iyo talooyin kaa caawin doona insha Allaah in aad hesho shaqo aad ku raaxaysan karto.
Sida loo helo shaqo kugu habboon.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka kaa caawin doona in aad garato haddii shaqadu kugu habboon tahay.
Go’aanso waxa aad ka rabto shaqo
Bilawga shaqo raadintaada, waqti ku qaado ka fikir waxa kugu dhaliyay in aad raadiso boos cusub. Ma xiisaynaysaa in aad shaqo u qabato shaqo-bixiye?
Ma rabtaa inaad beddesho waddooyinka shaqada?
Ma soo gashay suuqa shaqada markii ugu horeysay?
Ma ka soo laabanaysaa farqiga shaqada?
Mid kasta oo ka mid ah xaaladahan ayaa soo bandhigaya hab ka duwan oo lagu soo koobayo shaqooyinka aad rabto.
Baaritaano shaqo iyo tilmaamo shaqo
Runtii waxaa jira dhowr il oo kaa caawinaya in aad sahmiso fursadahaaga shaqo. Waxaad dib u eegi kartaa jagooyinka shaqo ee kala duwan si aad si fiican u fahanto waxa door gaar ahi ka kooban yahay iyo xirfadaha loo baahan karo.
Dib u eeg isbeddellada mushaharka
Runtii mushaharku waa hab ku tusaya isbeddellada magdhowga ee shaqooyinka gaarka ah ee meelo kala duwan. Geli magac shaqo oo waxaad arki doontaa tirada mushaharka ee magaalooyinka kala duwan iyo loo-shaqeeyayaasha kala duwan waa marka uu leeyahay website lagu soo bandhigo shaqada isla ururka/shirkadda/hay’adda aad rabto.
Aqoonso waxa aad u baahan tahay
Si kale oo aad shaqo raadintaada ugu soo koobto shaqooyinka kugu habboon ayaa ah in la aqoonsado meelaha aan laga gorgortami karin iyo meelaha laga yaabo inaad ka dabacsanaato. Shakhsi kastaa wuxuu leeyahay liis gaar ah, laakiin waa kuwan tusaalayaal laga yaabo inaad tixgeliso:
Tusaalooyinka arrimaha aan gorgortanka ahayn:
♦ Warshadaha ama waaxda aad rabto inaad ka shaqeyso
♦ Mushahar ka yar kii hore aad u qaadan jirtay
♦ Faa’iidooyinka dheeriga ah ee loo shaqeeyuhu bixiyo sida caymiska
♦ caafimaadka ama wakhtiga fasaxa la bixiyo
♦ Goobta iyo wakhtiga safarka shaqada
Tusaalooyinka arrimaha laga wada hadli karo:
♦ Magaca shaqada (la shaqayn, khabiir ama magac kale)
♦ Ka shaqaynta shaqo dheeri ah
♦ Qadarka yimaada waqtiga shaqada
Go’aaminta qodobbada ay tahay in la helo iyo kuwa laga wadahadli karo waxay kaa caawin doonaan inaad si kalsooni leh ugu dhaqaaqdo.
Tijaabi shaqo raadin kala duwan
Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dareenka shaqooyinka kuu banaan waa inaad tijaabiso ereyo raadin oo kala duwan. Markaad raadiso, waxaad ku fiicnaan doontaa inaad aqoonsato shaqooyinka kugu habboon iyo kuwa aan kugu haboonayn.
Haddi aanad hubin halka aad ka bilaabayso, waxa fiican in aad ku bilawdo erayo raadin balaadhan oo aad si joogto ah u soo koobto.
waxaad samayn kartaa digniin shaqo (Notification). Waxaad ku heli doontaa boosto shaqo oo cusub oo ku habboon sanduuqaaga iimaylka maalin kasta ama toddobaadle, iyadoo ku xidhan dookhaaga. Waxaad abuuri kartaa ogeysiis shaqo oo badan oo waad joojin kartaa ama tirtiri kartaa wakhti kasta.
Waxa kale oo aad kaydin kartaa xayeysiisyada shaqada ee aad jeceshahay oo ku soo noqo si aad si faahfaahsan u eegto. Waxa lagu kaydin doonaa akoonkaga Dhabta ah.
Adeegso aaladaha raadinta horumarsan
Talaabada xigta waa hoos u dhigida qoraalada shaqo raadinta iyadoo la adeegsanayo qalab raadin horumarsan. Qaar ka mid ah qalabka aad isticmaali karto runtii waa:
Shaandheeyayaashu waxay soo koobi karaan tirada natiijooyinka mushaharka, shirkadda, goobta, taariikhda dhajinta iyo wax ka badan. Doorashadan shaqo raadin ee horumarsan,
waxa aad suurtogal u ah in aad bog natiijooyin leh kumanaan shaqo u rogi karto dhawr darsin.
Ku dalbo Codsigaaga shaqada ee Dhabta ah.
Isha ku hay shaqooyinka leh ikhtiyaarka “Codso shaqada dhab ahaantii”. Kuwani waa qoraallo shaqo oo awood kuu siinaya inaad geliso resumeygaaga oo aad ku soo gudbiso codsigaaga dhowr jeer oo keliya, oo ku siinaya waqti qiimo leh oo shaqo raadis ah.
Dib u eegista shirkadda.
Meesha aad ka shaqayn doonto waxay la macno tahay shaqada aad qaban doonto. Isticmaal dib u eegista shirkadda Xaqiiqda ka jirta si aad u aragto dib u eegista shaqaalihii hore iyo kuwii dambe, si aad u hesho dareen dhab ah oo ku saabsan waxa ay u jecel yihiin in laga shaqeeyo shirkado kala duwan
La Xiriira: Hagaha Dhamaystiran ee Cilmi-baarista Shirkadda.
Go’aanso haddii aad buuxisay shuruudaha.
Markaad hesho shaqo soo dhejis ah oo u muuqata inay kugu habboon tahay, hubi inaad akhrido sharraxaadda shaqada oo dhan oo raac tilmaamaha codsiga.
Ka fiirso ogeysiisyada loo shaqeeyayasha.
Waxaad ku dadaalaysaa inaad soo gudbiso codsiyo shaqo oo si taxadar leh loo diyaariyay hubo inaadan arkin ama inaad weydo wax cusbooneysiin ah oo ka yimid loo shaqeeyaha markay ka jawaabayaan shaqadaada malinlaha ah. U hubso inaad si joogto ah u hubiso sanduuqaaga iimaylka iyo sanduuqaaga Dhabta ah ee akoonkaaga shaqada si aad u aragto in loo-shaqeeyayaashu kula soo xidhiidheen. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hubiso galka spamkaaga iimaylka haddii ay farriimaha halkaas ku soo degaan.